Ruzhinji Rwehukama Makambani Akagadzirira Kuwedzera Social Media | Martech Zone
NeChishanu, Nyamavhuvhu 21, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Neyangu yekupedzisira posvo ichirovera Brody PR, iwe unogona kufunga kuti ini ndiri wemagariro midhiya mukomana uyo anovenga maPR mafemu. Izvo hazvingagone kuwedzera kubva pachokwadi. Ndingadai ndakatumira zviri nyore blog post nezve social media agency dai vakaita chinhu chimwe chete ichocho.
Kyle Lacy akazvitora fambira mberi, achiti,
Kana yako yeruzhinji hukama femu isiri kunyora, kutaura, uye kudzidzisa vatengi vavo mashandisiro ezvemagariro media for brand management kana kutaurirana? vapise ipapo ipapo.
Nekuremekedza kwese, handibvumirane naKyle.
Hondo haisi pakati peRuzhinji Hukama neSocial Media, ini ndichiri kukoshesa hunyanzvi hunounzwa neRuzhinji Hukama patafura. Hapana wezvemagariro venhau nyanzvi (uye ini ndaizopokana navo vese) vakagadzirira kukwidziridza masvikiro aya zvirinani pane wePR agency iyo inonzwisisa nzira yekutaurirana nenzira kwayo nekuvaka maturakiti ekutaurirana neveruzhinji, vachishanda nekunze.
Chinhu chimwe isu vemasocial media vakomana chatinoramba tichikanganwa ndechekuti isu tiri mune vashoma. Veruzhinji hukama ndiye murume muhombe - achiri kudhonza tambo uye nekuisa toni kumakambani makuru pasi rose. Makambani ehukama neruzhinji achiri kuenderera mberi nekuwana mibairo mikuru kumabhizinesi avo uye inzvimbo hombe yekudyara kumakambani. Makambani ehukama hwepaguru akadzidziswa zviri pamutemo pane zvinobatika kutaurirana, masvikiro, matekiniki, nezvimwe. Ivo vamwe vanhu vanehungwaru!
Ini zvechokwadi ndinofunga iyo Social Media posse inowanzo kuwedzeredza-kuwedzeredza ese ari maviri masvikiro nekukosha kwedu pachedu. Vatengesi vakakura avo vakashanda mukutengesa kwakananga, tsamba dzakananga, kushambadzira kwedhatabhesi uye zvinyorwa izvo zvakagamuchira zvemagariro midhiya kuda kushanda munzvimbo nekuti zviri nyore kushandisa, zviri nyore kuyera, uye zvisingadhuri kuchinja mafambiro pane nhunzi.
Hondo pakati pemakambani ehukama neruzhinji inoda kuenda munzira uye vezvenhau vakomana vakaita saKyle neni tinoda kuvambundira, kuvabatsira, uye kudzidza kubva kwavari. Ndiri kutarisira kudzidzisa PR mafemu pane masvikiro, otomatiki uye ongororo iyo yemagariro midhiya inogona kupa kubvira, kana ivo zvitore, ivo vachada mhedzisiro yavanowana kubva kwazviri uye nekugutsikana iko iko kwainopa.
Ndiwo masendi angu maviri pane Ruzhinji Hukama uye ZveMagariro Midhiya!
Mufananidzo waKyle na Kyle Weller.
Tags: kyle lacyprhukama hwevanhuevanhu vezvenhau
Kugadzirisa WordPress Permalinks
Aug 21, 2009 na8: 58 PM
Mufananidzo uyo waKyle unotyisa! haha.
Ndinobvumirana. Ini ndaneta ne "social media vanhu" kushandisa nguva yakawandisa kuyedza kugonesa munhu wese kuti pasocial media yakakosha. Vanhu vanofanira kuziva parizvino. Dzimwe nguva zvinoita sekunge isu tinotora nzvimbo yekuzvidzivirira mumwe munhu asati atotipa kuramba kwekushandisa vezvenhau. Ndiri kuzopedza nguva shoma ndichigonesa uye yakawanda nguva kuendesa mhedzisiro kune avo vakatovhura maziso avo.
Aug 21, 2009 na5: 24 PM
Kutanga kubva, maita basa nekushandisa iwo mufananidzo. Iyo ndeimwe yehupfumi hwakavanzika mupic vault. Chechipiri, ini ndoda kujekesa kuti handisi kupokana nehukama neruzhinji zvachose. Ini ndinotenda kuti pr ichiri kutora basa rakakura mukukurukurirana nzira. Ndiri kungoedza kutaura kuti kana hukama hwako hwepaguru hwakasimba husiri kuongorora mukana wekushandisa midhiya havasi kuitira vatengi vavo kururamisira. Kune mafemu mazhinji kunze uko seBlast Media muIndipolis avo vari kushandisa vezvenhau munzira dzakakodzera. Iwe unofanirwa kukumbundira Internet yekutaurirana iyo poindi yakakosha zvakanyanya. Isu tiri kungoedza kuita kuti vanhu vazvidavirire.
Kwakanaka kutumira, Doug. Ini ndinokumbira ruregerero kune chero zvisirizvo zvataurwa izvi zviri kutaipirwa pane yangu iPhone.
Aug 21, 2009 na9: 47 PM
Nhaurwa yakanaka yaidikanwa kumberi kwePR, Kyle. Uye ini ndakanyatsorega Brody ave nayo neiyo yekupedzisira posvo saka ini ndaida kuzvinunura ini zvishoma.
Iyo pikicha inotyisa! Ndakawana mamwe anotonhorera, zvakare…. kunyanya uya anewe wakaputirwa negumbo remumwe musikana… penya. Ini ndakapotsa ndaishandisa! Mifananidzo yeGoogle ZVINOTYISA!
Aug 21, 2009 na9: 26 PM
Ndakafemerwa kutanga yakanaka blog inonzi "Zvidzidzo Zvakadzidziswa" kuitira kuti vamwe vabatsirwe. Ndatenda nekundibvumidza kuisa yako quote. Hechino chinongedzo kune iyo posvo, http://brodypr.blogspot.com/
Ndinoonga mhinduro yako.
Aug 21, 2009 na5: 33 PM
Robby. Haumbotadzi kushamisika. Ndichiri kufunga kuti iwe unofanirwa kuzvipikisa iwe pachako. 🙂
Aug 21, 2009 na9: 29 PM
Heano maitiro ePublic Relations Society of America (PRSA) kutsanangura PR:
Ruzhinji Rwehukama iseti yemanejimendi, manejimendi, uye ehunyanzvi mabasa anosimudzira kugona kwesangano kuteerera, kukoshesa, uye kupindura kune avo vanhu vane hukama hunobatsira pamwe nesangano hwakakosha kana iri yekuzadzisa mamisheni uye kukosha kwayo.
Iyi tsananguro yakafara kuseka. Zvinoreva kuti PR yakagadzirirwa "kukurudzira kutaurirana zvine hungwaru" nemunhu wese akakosha kusangano. Asi iwe haugone kuzadzisa ichi chinangwa nekuwanda. Wese mushandi, mutengi wese, munhu wega wega ane simba rekutaura nezvekambani yako chero nguva yavanoda. Makambani ePR akave nesimba rakakura pakuona kweruzhinji nekugadzira zvine hungwaru mameseji kuvazhinji venhau. Kumuka kwemanzwi ega ega muchimiro chemagariro enhau chinhu chisingamiswe. Iyo kambani haigone kutarisira kushandisa yakakwana PR nyanzvi kuti vataure nemamirioni avanhu zvakasiyana.
Izvi hazvireve kuti PR haina kukosha. Zvakareruka, iyo PR se "kuronga basa" ine kukosha chete munyika umo midhiya inotonga ruzhinji maonero. Tichiri kugara munyika iyoyo, asi iri kufa nekukurumidza. Materevhizheni network, maredhiyo uye mapepanhau ari kudonha munzvimbo dzese.
Chikurukuru ndechekuti PR inoziva kuti iri kukundikana. Zvinoenderana neEdelman 2009 Trust Barometer (http://www.edelman.com/trust/), "Target =" _ blank "> www.edelman.com/trust/), 77% yevaAmerican vanovimba makambani zvishoma kupfuura gore rapfuura. Ivo zvakare vanotaura kuti chete 26% yedu isu tinonyatsovimba yemakambani venhau zvirevo. Uye nenzira-Edelman ndiye akasimba PR yakasimba pasi rose!
Kana vanhu vePR vangowana chete 1/4 yedu yekuvimba navo, vanofanirwa kunge vakaipa zvakanyanya pamabasa avo. Fungidzira kana chete 1/4 yeshamwari dzako nemhuri vachivimba newe. Pamwe nzira kwayo yekuti makambani avake kuvimba nekutaurirana nevanhu haisi kuburikidza nekunyatso kubatanidzwa kwePR vanhu, asi nekukurudzira vashandi kuti vataure nevanhu nezve zviri kuitika. Izvo zvinogona kuvaka hukama hunobatsira, panzvimbo peye imwechete yakatsimbirwa muspin.
ndinofunga hukama hweveruzhinji huri kutamba rakakura basa uye rakanyanya kudikanwa zvakare. makomendi mazhinji ari pano ehurukuro yedhivhosi ndinobvumirana navo zvachose panofanira kunge paine gakava pamusoro penyaya iyi. tingave isu tinogona kutanga gakava pano pane ino posvo zvakare kuburikidza nezvakataurwa zvakare. kuitira kuti paite gakava pfupi pakati pedu tese… zvakanaka yakanaka posvo pamwe nepikicha .. rombo rakanaka
Zvakanaka, zvakapihwa vhoriyamu rekushambadzira mameseji (ayo 90% marara) ayo vatengi nemabhizinesi ari kupombwa nawo, zvinongova zvakanaka kutarisira vanokakavara kuti kana vezvenhau vanoshandira bhizinesi ravo here. Kunze kwekunge chigadzirwa chako chakanangana nehuwandu hwevanhu pane iyo yemagariro midhiya, zvinotora nesimba rakawanda kudhonza chero chinhu mukati, kunyanya kana iwe uri mukomana mudiki ane risingazivikanwe marangi.
Sep 23, 2009 na7: 43 PM
Kunonoka kuenda kumafaro, asi chikuru posvo Doug (uye anozvininipisa pane icho-chinozorodza kuti uone kubva kune imwe yehunyanzvi). Ini ndinobvuma, kukakavara kunoda kuiswa parutivi; kune mimwe mikana mikuru kunze uko. Ini ndinokumbira ruregerero kumberi nekuva munhu anozvishandira, asi isu (RSW / US) tangopedza ongororo, MaAgency 'nemaKlayenti' maonero pane Yemagariro / Dhijitari nzvimbo, iyo inozadzisa yako post zvakanaka. Kunyanya, chimwe chezviwanikwa:
Pakati pezvikamu zviviri zvekutanga zvekushambadzira zvakaongororwa, zvinoita sekunge maFemu ePR ane gumbo kumusoro maererano nekwaniso yavo / ruzivo mukugadzirisa kuyerwa kwemasocial media. 60% yePR Firms inotaura kuti vanoyera midhiya enhau kana ichienzaniswa ne49 chete% yeAd Agency uye 45% yeVashambadzi.
Ziva ichi chidimbu che data chakati kunze kwechimiro, asi iwe unogona kurodha pasi ongororo apa: http://www.rswus.com/main/indexsurvey.php Kutarisira mberi kutevera yako blog.
Uku kuongorora kwakanakisa uye ndakaigoverana kune vashoma vatengi uye vatinoshanda navo! Ndatenda zvikuru nekuigovana.